Sarudzo Dzoitwa muBikita West Mushure Mekudzingwa kwaVaKereke muZanu PF
Gumiguru 03, 2013
WASHINGTON DC — Mutauriri wedare reNational Assembly, VaJacob Mudenda, vazivisa dare iri kuti dunhu reBikita West harichina mumiriri mudare iri zvichitevera kudzingwa muZanu PF kwevaimirira nzvimbo iyi, VaMunyaradzi Kereke, nebato ravo.
Vachitaura patanga kugara dare iri, VaMudenda vati nzvimbo yeBikita West haisisina mumiriri uye vachatozivisa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vatare zuva richaitwa sarudzo munzvimbo iyi sezvinodiwa nemutemo wesarudzo weElectoral Act.
Mashoko aVaMudenda anotevera tsamba yavakanyorerwa nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaDidymus Mutasa, vachivaudza kuti VaKereke havasisiri nhengo yeZanu PF.
VaKereke vakadzingwa muZanu PF mushure mekuzvidza chisungo chebato ravo chekuti varege kukwikwidza musarudzo.
Zanu PF yaida kuti VaElias Musakwa, avo vainge vadomwa nePolitburo yebato iri, vamirire Zanu PF kuBikita West musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Pasi pebumbiro remutemo, nhengo yedare reparamende inomira kuve nhengo yedare iri kana ichinge yadzingwa nebato rayo kana kuti ichinge yabatwa nemhosva pasi pemutemo wesarudzo.
VaKereke, avo vakakwikwidza musarudzo naVaMusakwa vese vakamirira Zanu PF, vange vasiri mudare.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaKereke kuti vanotambira seyi danho ratorwa neparamende, uye kuti vachakwikwidza vakazvimirira here kana sarudzo dzekuBikita West dzadaidzirwa nemutungamiri wenyika.
Asi mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti panguva iyo bato rakazivisa VaKereke kuti vasapinda musarudzo, VaKereke vakaisa zvimiti munzeve dzavo vakaenderera mberi nekukwikwidza vachiti vari kumirira Zanu PF, izvo zvakazoita kuti bato iri rimirirwe nevanhu vaviri.
Munguva yekutsvaga rutsigiro, mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vakashora zvikuru VaKereke nekuramba kuteerera bato kwavakaita.
Muna Zvita wa 2010, VaKereke, avo vaive chipangamazano chagavhuna webhanga guru renyika, VaGedion Gono, vakapomerwa mhosva yekubhinya mwana ane makore gumi nerimwe.
Nyaya iyi inonzi haisati yaferefetwa nemapurisa, kunyange hazvo yakamhan’arwa.
Zvichakadai, VaMudenda vayambira nhengo dzedare iri dzeMDC T kuti dzicharangwa kana dzikaramba dzisingatevedze mitemo yedare iri.
Izvi zvinotevera zvakaitwa nenhengo dzedare iri neChitatu apo dzakasimukira mukuru wadzo mudare, Muzvare Thokozani Khupe, apo vakapinda mudare.
Pasi pemitemo yemashandiro edare reNational Assembly nhengo dzedare iri dzinofanirwa kusimuka chete kana mutauriri wedare iri, kana mutungamiri wenyika achinge apinda mudare.